ညိုထက်ညို - ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် - MoeMaKa Media
Home / Essays / Nyo Htet Nyo / Opinion / ညိုထက်ညို - ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ်
ညိုထက်ညို - ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ်
Essays, Nyo Htet Nyo, Opinion
Photo- Culture Trip
အဲဒီနေ့ မနက်ခုနစ်နာရီခွဲလောက်မှာ ကျွန်တော် အိပ်ရာက ထတယ်….
သွားတိုက်တယ်၊ မျက်နှာသစ်တယ်၊ ကိုယ်လက်သန့်စင်တယ်၊ အဲဒါတွေ အပြီး စားပွဲပေါ်မှာ ချထားတဲ့ ကော်ဖီ ကို သောက်ရင်း ဖုန်းကို ဖွင့်ကြည့်မိတော့ ဖုန်းက ဖွင့်မရဘူး ဖြစ်နေတယ်….
ဒုက္ခပါပဲ၊ ဒီ ကိုဗစ်ကာလမှာ လူကအလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ရုန်းကန်နေရတဲ့အထဲ ဖုန်းက လာပျက်နေတယ်….
အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော်ပျက်နေတဲ့ဖုန်းထဲက sim card ကို ထုတ်ပြီး တခြား ဖုန်းအကောင်းတစ်လုံးထဲ ပြန်ပြောင်းထည့်ရတယ်….
ပြီးတော့ ဖုန်းဆက်စရာ ရှိတာတွေ ပြန်ဆက်ပြီး မနက်တစ်ပိုင်းလုံး လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ရတယ်….
နေ့လယ် ထမင်းစားပြီးချိန်ကျမှပဲ ကျွန်တော်ဖုန်းသွားပြင်ဖို့ အချိန်ပေးနိုင်တော့တယ်….
အဲဒီမှာပဲ ယုဇနပလာဇာဆီကို ကျွန်တော် ထွက်လာခဲ့တယ်။
………………………. …………………… …………………….
မိုးတဖြောက်ဖြောက် ရွာနေတဲ့ကြားမှာ ကျွန်တော်ယုဇနပလာဇာကိုမသွားခင် ၄၇ လမ်းထိပ်က သူငယ်ချင်းရဲ့ ဆိုင်ကို အရင်ဝင်မိတယ်….
အဲဒီမှာပဲ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဆိုင်မှာ တခြားငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ထပ်ဆုံလို့ စကားကောင်းနေလိုက်တာ တစ်နာရီလောက် ကြာသွားတယ်….
ဒါနဲ့ပဲ နေ့လည် နှစ်ချက်ကျော်ကျော်လောက်မှ ကျွန်တော် စကားမနည်းဖြတ်ပြီး ယုဇနပလာဇာကို လစ်နိုင်တော့တယ်….
ပုစွန်တောင် စက်ဆန်းဘက်ကနေ ကျွန်တော် ပြန်တက်လာခဲ့တာ ကားတွေ မတရားပိတ်နေတာနဲ့ နေ့လယ် နှစ်ချက်ခွဲလောက်မှပဲ ယုဇနပလာဇာ နောက်ဘက်က လမ်းတစ်လမ်းကို ရောက်တော့တယ်….
အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော် ကားကို လွတ်တဲ့တစ်နေရာမှာထိုးထားခဲ့ပြီး ထီးကတစ်ဖက် လက်ထဲမှာ ပျက်နေတဲ့ ဖုန်းက တစ်ဖက်၊ မျက်နှာမှာ mask တပ်ထားရလို့ တစ်ခါတစ်ခါ လျှောလျှောကျလာတဲ့ တပ်ထားတဲ့မျက်မှန်ကို ပြန်ပြန်တင်နေရတာက တစ်ဖက်နဲ့ အတော့်ကို ကိုးရို့ကားယား ယုဇနပလာဇာရဲ့ ဘေးဘက်ခြမ်းကို ရောက် လာတယ်…..
တကယ်က ကျွန်တော်ယုဇနပလာဇာကိုမရောက်တာဆို ခြောက်လ ၇ လလောက်တောင်ရှိနေပြီထင်တယ်….
မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော် နောက်ဆုံးရောက်တုန်းကလည်း အခုပျက်နေတဲ့ဖုန်းကို ပြင်ဖို့ ရောက်ခဲ့ရတာပဲ....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခု ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့ အခု ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါ Covid-19 ကာလမှာ ယုဇနပလာဇာကို ဟိုအရင် ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တုန်းကအတိုင်း တစ်ရွေးသားမှမလျော့ဘဲ လူတွေ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်နဲ့ ပြန်တွေ့ရလို့ အံ့တောင်သြသွားတယ်….
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အံ့သြတာကိုဘေးချိတ်ရင်း ယုဇနပလာဇာဘေးဘက်အဝင်ပေါက် ရဲ့ အဝမှာ လုံခြုံရေးဝတ်စုံ တွေဝတ်ပြီး ယာယီထိုးထားတဲ့ပလတ်စတစ်တဲထဲထိုင်နေတဲ့ လူသုံးလေးယောက်ဘေးကဖြတ်ပြီး ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ရတယ်….
ဝင်ခဲ့ရင်းဘေးကို ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ ဝင်လာတဲ့လူတွေကို mask တပ်ဖို့နဲ့ လက်ဆေးကြဖို့ ဆော်သြထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့တယ်….
ဒါပေမဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကဆိုင်းဘုတ်ပါပဲ၊ လူတွေက လူတွေပါပဲ၊ ကျွန်တော်တွေ့ရသလောက်တော့ မျက်စိ တစ်ဆုံး မြင်နေရတဲ့ ရာနဲ့ချီလူအုပ်ကြီးထဲ mask တပ်ထားတဲ့သူဟာ ဆယ်ယောက်တစ်ယောက်လောက်တောင် အနိုင်နိုင် ဖြစ်နေတယ်….
မြင်နေရတဲ့ရေဘုံပိုင်မှာ လက်ဆေးတဲ့သူလည်း ရှိကို မရှိသလောက်ပဲ….
ထားပါထားပါ ထားပါ…. ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်းလက်မဆေးဖြစ်တော့ဘဲ ပလာဇာထဲကို ဝင်ခဲ့တယ်….
ဝင်ပြီး ပထမထပ်ကိုတက်ဖို့ ဓာတ်လှေကား ရှေ့မှာ ကျွန်တော် ထပ်စောင့်ရတယ်….
စောင့်နေရင်းပဲ ကြာလာတာနဲ့ ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာပြီး အဲဒီနားကလူတစ်ယောက်ကိုမေးရင်း အပြင်ဘက်ကလှေကားကနေ ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ်သုံးပြီးပဲ ပထမထပ်ကို တက်ခဲ့တယ်….
ပထမထပ်ကိုရောက်တော့ လူဝင်ပေါက်ကနေ ကျွန်တော်အထဲကို ဝင်လိုက်တယ်….
များလိုက်တဲ့ လူတွေမှ မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်နေရတာ အနည်းလေး လူသုံးလေးရာ လောက်ကို ရှိတယ်။
……………………….. ……………………….. ………………………
ပထမဆုံး ကြုံလိုက်ရတာက ရာနဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးထဲ ကျွန်တော် ဖျတ်ခနဲ ရောက်သွားတယ်….
ချွေးတွေနဲ့ သံတွေနဲ့၊ အားလုံး အားလုံး ခုလို ကိုဗစ်ဖြစ်နေချိန်မှာ စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ကျောချင်းကပ် ရင်ချင်းအပ်နေရတယ်….
မိန်းမတစ်ယောက်က ကျွန်တော့် ရှေ့မှာ ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်နေတယ်၊ ကျွန်တော် သူ့တင်ပါးနဲ့ မတိုက်မိအောင် မနည်းကြီး ကိုယ်ကိုရို့ပြီး ရှောင်ရတယ်….
လက်ထဲမှာ ထီးကတစ်ဖက်၊ မျက်နှာကိုအုပ်ထားရတဲ့ mask ကြောင့် အသက်ရှူကျပ်ပြီး စီးကျလာတဲ့ ချွေးတွေက တစ်ဖက်၊ နောက် လက်တစ်ဖက်ထဲမှာပြင်ဖို့ယူလာတဲ့ ဖုန်းက တစ်ဖက်၊ အို…. ရောက်လိုက်တဲ့ ဒုက္ခ မှ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ….
အဲဒီမှာပဲ လူအုပ်ကြီးထဲ တိုးရင်းဝှေ့ရင်း ရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့ ‘ရွှေလက်ဆောင်’ ဖုန်းပြုပြင်တဲ့ ဆိုင်ရှေ့ ရောက် လာတယ်…..
ယုဇနပလာဇာ ပထမထပ်က ဖုန်းပြင်တဲ့ဆိုင်တွေထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံးလို့ဆိုလို့ရလောက်တဲ့ ‘ရွှေလက် ဆောင်’ ဆိုင်ရှေ့မှာလည်း ဖုန်းပြင်ဖို့ ရောက်နေတဲ့လူတွေမှ မနည်းမနောပဲ….
အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ရှေ့က ဖုန်းပြင်ဖို့တန်းစီနေတဲ့ လူသုံးလေးယောက်ဘေးရပ်ပြီး ကိုယ့်အလှည့်ကျဖို့ စောင့်ရတယ်….
ရန်ကုန်မှာ ဖုန်းပျက်တဲ့လူတွေ ဘယ်လောက်တောင်များလဲဆိုတာလည်း ကိုယ်တိုင် ယုဇနပလာဇာ ပထမထပ်ကို ရောက်မှပဲ သိတယ်….
လူတွေ လူတွေမှ တကယ့်ကို မနည်းမနောပဲ….
ပလတ်စတစ်စ တွေနဲ့ ကာထားတဲ့ ဆိုင်ထဲက ကောင်မလေးတွေမှ လက်မလည်အောင်ကို လာပြတဲ့ဖုန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ဘောက်ချာတွေ ဖြတ်ပေးနေရတယ်….
အထဲကို ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့လည်း ခုံလေးတွေနဲ့ထိုင်ပြီး လာအပ်တဲ့ဖုန်းတွေကိုပြင်ပေးနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေမှ ခုနစ်ယောက် ရှစ်ယောက်လောက်ကို ရှိတယ်….
အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော့် အလှည့် ရောက်လာတာနဲ့ ဖုန်းကို ထိုးပေးပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောလိုက်တော့ ကောင်မလေး က ကျွန်တော့်ဖုန်းကို စစ်ပေးပြီး အထဲက လူတစ်ယောက်ကို သွားပြတယ်….
ပြီးတော့ ပြန်လာပြီး လဲစရာရှိတာ လဲရမှာမို့ သုံးသောင်းကျမယ်တဲ့….
ပြင်မယ်ဆို ခဏထားခဲ့ပြီး ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်ပြီး လာယူဖို့ ပြန်ခေါ်ပေးမယ်တဲ့…..
အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်ပြီး ကောင်မလေးပေးတဲ့ ဘောက်ချာလေးကို ယူရတယ်….
အဲဒီတော့လည်း ‘ကျေးဇူးပဲနော် ဦး’ တဲ့…..
‘ဦး’ တဲ့ ။
………………….. ………………….. ……………………
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ် လောက်ကနဲ့ တူတယ်၊ အင်တာနက်ပေါ် ဖျတ်ခနဲ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲမှာ ‘ရန်ကုန်တဲ့ … အသံတွေတောင် တုန်လို့’ ဆိုပြီး ရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရဖူးတယ်….
တကယ်ပါပဲ တကယ်ပါပဲ၊ အခုတော့လည်း အသံတွေတုန်ရုံမကလို့ အသံပါ လုံးဝပျောက်ထွက်သွားရလောက်အောင် ရန်ကုန်ဟာ ဒုက္ခရောက်နေရပါပြီလို့ပဲ ပြောရမယ်….
အခု ကိုဗစ် ဖြစ်ကာစ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လ လောက်ကထင်တယ်၊ ရန်ကုန်ကို lockdown ချပြီး လူတွေ အပြင်မထွက်ဖို့ ကန့်သတ်ထားတုန်း လူတွေကားတွေ ရှင်းနေတဲ့ ရန်ကုန်က လမ်းကြီးလမ်းငယ် အသွယ်သွယ်ကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ် တက်လာတယ်…..
အောင်မယ်… သီချင်းတစ်ပုဒ်တောင် တီဗီမှာ ကျွန်တော် တွေ့လိုက်ရသေးတယ်….
ဘာတဲ့…. ပြန်နိုးထလာမှာပါ ရန်ကုန် တဲ့ ….
သီချင်းထဲမှာ လူတွေ ကားတွေ ရှင်းနေလင်းနေတဲ့ ရန်ကုန်က လမ်းမကြီးတွေကို ရိုက်ပြထားသေးတယ်….
အောင်မယ်လေး အောင်မယ်လေး မနိုးထပါနဲ့ မနိုးထပါနဲ့ ကြောက်လှပါပြီ…. အဲဒီလိုတောင် ကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာ ပြောမိတယ်….
ပြောလည်း ပြောလောက်တယ်လေ၊ ဘယ့်နှယ်၊ မြန်မာပြည် လူဦးရေရဲ့ ခြောက်ပုံတစ်ပုံလောက်ဟာ အခု ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်နေကြပါတယ်တဲ့…..
ဘယ့်နှယ်၊ ဒီ ဆယ့်လေးငါးမိုင် ပတ်လည်လေးအတွင်းမှာ ဧရိယာစတုရန်း မိုင်ပေါင်း နှစ်သိန်းခြောက်သောင်း ကျော်တောင် ရှိတဲ့ မြန်မာပြည် မှာ ရှိတဲ့ လူဦးရေ ရဲ့ ခြောက်ပုံတစ်ပုံ လောက်ဟာ နေနေကြပါသတဲ့….
ဝန် နဲ့ အား မမျှမတဖြစ်နေတာမှ လွန်လွန်းအားကြီးလို့ ရန်ကုန်လိုဖြစ်နေတဲ့ မြို့ ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိမယ်တောင် မထင်မိအောင် ဖြစ်မိတယ်….
တရားခံကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် ရန်ကုန်နဲ့တကွ မြန်မာပြည်ကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ လက်ချက်ပါပဲ။
ဘယ့်နှယ် ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အစရှိသည်ရှိသည် လူ လေးငါးသိန်းလောက်အတွက်ပဲ အဆင်ပြေပြေ အခြေကျကျ နေဖို့ထိုင်ဖို့ စီမံထားတဲ့ မြို့မှာ ဆယ်ဆမက တဲ့ လူတွေကို ပြွတ်သိပ်ကြပ်ညပ် နေအောင် မူလ နှစ်ထပ် သုံးထပ်တိုက်တွေကို ခုနစ်ထပ် ရှစ်ထပ် စာကလေးသိုက်လို အခန်းကလေးတွေ နဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ တိုက်တွေပြည့်နေတဲ့ မြို့ ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်….
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာဖြင့် ဘယ်မြို့ဘယ်ပြမဆို မြို့ပြ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာကို တိတိကျကျလိုက်နာကျင့်သုံး ရတယ်…. သုံးထပ်တိုက်နေရာမှာ ရှစ်ထပ်တိုက်ဖြစ်လာခွင့်မရှိ၊ အားကစားကွင်းတွေကို ဟိုတယ်ကြီးတွေ၊ ပလာဇာကြီးတွေ စသည်စသည် ဆောက်လုပ်ခွင့်မရှိ၊ ရပ်ထဲရွာထဲက မီးတားလမ်းတွေကို အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့်မရှိ၊ တိုက်တစ်လုံးနဲ့ နောက်တစ်လုံးကြား အခု ဖြစ်နေသလို ဒီဘက်တိုက်ရဲ့ ပြတင်းပေါက် ကနေ ဟိုဘက်တိုက်ရဲ့ ပြတင်းပေါက်ကို ခွပြီးကူးလို့ ရလောက်အောင် ကပ်ဆောက်ခွင့်မရှိ၊ Fire Exit လို့ ခေါ်တဲ့ မီးလောင်ရင် ထွက်ပြေးစရာ နေရာလေးမှ မချန်ဘဲ ရှိသမျှ နေရာ အကုန်လုံးကို အခန်းတွေ ဆောက်ခွင့်မရှိ။
အဲဒီလို မရှိခြင်းပေါင်းများစွာ နဲ့ ကန့်သတ်ထားလို့ တခြားနိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေရဲ့ မြို့ကြီးပြကြီးတွေဟာ ရန်ကုန်လို မဟုတ်ဘဲ အနည်းလေး အသက်ကလေးကိုတော့ ဝဝ ရှူလို့ ရကြတယ်….
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မှာတော့ အရင်ခေတ်မပြောပါနဲ့၊ အခု ခေတ်လို့ ပြောလို့ရမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ် ကတောင် မြို့ထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး ကျန်နေတဲ့ သိမ်ဖြူကွင်းကြီး ‘ပါ’ သွားခဲ့ရတယ်….
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် အဲဒီ စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ လူတွေဆန္ဒပြကြပါသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပြလည်း ပြပြသာ၊ နောက်ဆုံးတော့လည်း အခု မြင်နေရတဲ့အတိုင်း ဒေါ်လာသိန်းသန်းချီတန် တဲ့ အခန်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တိုက်ကြီးတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်။ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာတွေအကျိုးရှိသွားသလဲ တော့ ကျွန်တော် မသိ၊ ကျွန်တော်သိတာက ရန်ကုန်က လူတွေအတွက် Public Space တစ်ခု ပျောက်သွားခဲ့ရပြီ။
အခုတော့လည်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ရပြီ။ ဒီလိုဒီလိုနည်း နဲ့ မည်သို့မည်ပုံ ပြုလုပ်လိုက်သည် မသိ၊ လူတွေ မြင်ကွင်းထဲက ပျောက်သွားခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန် ရဲ့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် အများပြည်သူပိုင် မြေတွေဟာ တကယ် ကျကျနနစာရင်းကောက်ကြည့် မယ်ဆို မနည်းမနော အဆင့် မှာကို ရှိတယ်။
အခုတော့လည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးလေးဆယ် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ဆော့ခဲ့ ပြေးခဲ့ လွှားခဲ့ ပျော်ခဲ့ ရတဲ့ ရန်ကုန် ရဲ့ မြေနေရာတွေမှာ ကွန်ကရစ်အတုံးအခဲကြီး တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်….
………………………. ……………………… ……………………….
လာလမ်းအတိုင်း လူတွေကြားထဲ တိုးကာဝှေ့ကာ ကျွန်တော် ပြန်ထွက်လာပြီး ယုဇနပလာဇာအပြင်ကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ မခံနိုင်လောက်အောင် အသက်ရှူ ကြပ်လာတာနဲ့ မျက်နှာ မှာ တပ်ထားတဲ့ Mask ကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်ရတယ်….
မဖြုတ်လို့လည်း မဖြစ်နိုင်၊ ဖြုတ်များမဖြုတ်ရင် ကိုဗစ်မကူးခင် အသက်ရှူ အရင်ကြပ်ပြီး သေဖို့ရှိတော့တယ်။
ဒီလောက် မဖြစ်စလောက်နေရာကလေးမှာ တစ်ကိုယ်စာ အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီး ဆိုင်ခန်း ကျဉ်းကျဉ်းကလေးတွေ ဒီလောက် အမြောက်အများနေရာချထားပေးမှတော့ ဒီလောက် လူတွေ ကြပ်ပိတ်သိပ်နေတာ ဘာဆန်းတော့မှာလဲ။
တကယ်လို့များ Covid-19 ရောဂါပိုး သယ်ဆောင်လာသူတစ်ယောက်လောက်ပဲရှိ၊ ယုဇနပလာဇာ တစ်ခုလုံးက လူတွေကူးပြီး နေ့မကူးခင် သူတို့ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာအိမ်တွေက မိသားစုတွေကိုပါ ဆက်ကူးပြီး ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး ဒုက္ခရောက်သွားဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။
ရောက်လည်း ရောက်ရောက်ပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဖြင့် လူတကိုယ်စာ အကျိုးစီးပွားဟာ အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားထက် အဆရာထောင် ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။
အဲဒီအတွက် အသက်တွေ ပေးရပါတယ်၊ မီးလောင်ရင်၊ ရေကြီးရင်၊ မြေပြိုရင်၊ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ လူဦးရေ ထက် ပိုအောင် စီမံထားလို့ လူတွေ ပြေးပေါက်မရှိ၊ ကယ်ဆယ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း မရှိ၊ ထိန်းချုပ်ဖို့ နည်းလမ်းမရှိ၊ ဒီတော့ နဂိုရှိတဲ့ အသက်တွေကို အဖိုးအခအဖြစ် ပေးကြရပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေကို မြင်စမ်းစေချင်တယ်….
တိုရေရှားရေ ခရီးလေး ဘာလေးများ ထွက်ခွင့်ရလို့ ရန်ကုန် နယ်နိမိတ်ကလွန်တာနဲ့ ရန်ကုန်သား စစ်စစ် တွေ ပျော်နေကြပုံတွေကိုလေ….
ရန်ကုန်သား ‘မောင်ဘချစ်’ တွေ အပျော်ကြီးပျော်နေကြပုံတွေကိုလေ ။ ။
ညိုထက်ညို - ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် Reviewed by k on 11:04 AM Rating: 5